Isbarbar yaacyada iyo shabeelka: Waa inuu lahaadaa Macaamilka Ganacsiga Mac | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 15, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Iyadoo ay jiraan codsiyo ganacsi oo badan oo ka socda Microsoft, Mac wali waa xanuun ku jira badhida si uu ugu ordo goobaha ganacsiga. Cusbooneysiinta Nidaamka Hawlgalka ee ugu dambeeyay ee Apple wuxuu bixiyaa xoogaa gargaar ah BootCamp, oo ah codsi kuu oggolaanaya inaad laba-ku dhejiso Mac-ku-saleysan Intel midkood OSX ama Windows.
Kordhinta laba-geesoodka ah, inta badan, runtii waxay u egtahay in laba kumbuyuutar oo kala duwan laga isticmaalo isla qalabka, in kastoo. Bootcamp wuu fiican yahay, laakiin dib u noqoshada iyo horay u socodka ma ahan hawl fudud. Isbarbardhigyadu way xalliyeen dhibaatada, in kasta oo ay ku milmeen labada adduun adduun aan si fudud ugu muuqan mid sax ah! Waxaan waday isbarbar dhig (mahadsanid saaxiib, Bill) tan iyo noocyadeedii hore.
Markii isku xirnaanshaha la soo saaray, waa marka waxyaabo waalan ay bilaabeen inay dhacaan… oo leh deked, bar bar iyo tufaax baarka oo dhan isla daaqad kaliya waxay umuuqataa inay qalad yihiin! Xitaa ka sii xun? Jiidida iyo ka daadinta codsiyada Windows ilaa barnaamijyada Mac iyo tan kale. Cajiib! Ku Mac iyo PC dood waa la nasiyey, saw maaha?
Mar dambe uma baahna farshaxan garaaf ah, naqshadeeye Websaydh, ama farsamo yaqaan hubinta tayada dalabku u baahan yahay qaybo badan oo qalab ah si ay u sameeyaan wax fudud oo ah tijaabada u hoggaansamida iskudhafidda. Dhammaantood waxay si siman u socon karaan isla Mac - kiiskeyga waa MacBookPro.
Markuu shabeelku soo baxay, waxay umuuqatay farxaddaydu dhammaatay! Waan kharibay XP oo si fudud uma heli karin codsiyadaydu inay u shaqeeyaan sidii ay ahaan jireen. Waa lay xoqay, xitaa waxaan qaatay fursad aan ku qoro qaar ka mid ah dadka waawayn iskumar ahaan shaqsiyan. Waxay ahaayeen rag wanaagsan waxayna ii xaqiijiyeen in caawimaadda ay soo socoto!
Isbarbar yaac iyo shabeel
Toddobaadkan ayay timid! Casriyayntii ugu dambeysay ee Isbarbar dhigyadu waxay ku dareen sifooyin kale oo dheeri ah oo ay weheliso waafaqid Leopard buuxa. Haddii aad raadineyso codsi weyn oo loogu talagalay macmacaankaaga Mac - tani waxay noqon kartaa.
Haddii aad tahay qof kombuyuutar ah oo aad si cad uga baqeyso dadkaas Mac qabow ah - tani waa fursaddaada inaad weli ku haysato tufaaxa dhalaalaya laptop-kaaga laakiin ku socodsiiya barnaamijyadaada wanaagsan ee 'ol' Windows-ka.
Tags: demographicsjawaab celinta naqshadacilmi baarissahan onlinejawaab celinta alaabtanolosha warbaahinta bulshadaSurveyMonkeysahaminta cilmi-baarista suuqaubervuqalabka naqshadeynta websaydhka
Billaac: Dhirbaaxo baraf ah
15, 2007 at 7: 34 PM
Weli ma aanan shaqeynin geesinimo igu filan si aan u helo Mac-keyga koowaad. Gabadhayda tallaabada ku dhaaratay iyada iyo hooyadeed, tan kale ee muhiimka ah, ayaa had iyo jeer ka xadaya Macdeeda sababtoo ah waxay u maleyneysaa inay fududahay in la isticmaalo. Waxaan ku soo koray… (waxaan uga soo gudbay xiisadda da'da dhexe ugana sii gudbay dhinaca buuraha)… Windows-ka waan ka labalabeynayaa inaan beddelo. Qofna miyuu igu riixi doonaa jihada saxda ah. Maxaan u iibsadaa Mac. Waxaan rabaa laptop cusub oo fudud.
15, 2007 at 7: 42 PM
Mac waa jidka loo maro, gaar ahaan hadda Isbarbar dhigga. U diyaar garowga inaan ku rakibo Leopard laptop-ka xaaskeyga. Shaqadaydii ugu dambaysay waxay ahayd riixitaanka kombuyuutar kombuyuutar kombiyuutar ah oo loo yaqaan 'laptop' si dhab ah loogu tijaabiyo kumbuyuutar kumbuyuutar ah halkii loo baahnaan lahaa shaybaar baaris
Waxaan haystay kombuyutarkayga 'Mac' muddo sannado ah wax dhibaato ahna kama qabin sida inaan u adeegsado PC iyo windows.
15, 2007 at 7: 53 PM
Waxaan ka fekerayay inaan tan u helo mac-shaqadayda, markaa waxaan ku tijaabin karaa bogagga shabakadaha daalacashada Windows… Waxaan la yaabanahay intee bay kheyraad u eg tahay?
15, 2007 at 8: 18 PM
Ma ahan wax aad u xun, Mike. Tusaale kasta oo OS ah oo aad dejiso, waad dejin kartaa xaddiga xusuusta la xidhiidha. Waxaan haystaa 2Gb oo RAM ah oo waxaan haystaa Windows XP oo ku socda ilaa 1Gb.
Ma qaadanayso awood badan oo processor ah in lagu socodsiiyo OS midkoodna - laakiin codsiyada aad ku dhex ordo waxay noqon doonaan doogeyaal haddii ay horay u ahaan jireen doofaarro.
15, 2007 at 11: 36 PM
Waxaan isticmaalaa VMWare Fusion, oo aan aaminsanahay inay tahay ikhtiyaar fiican, maadaama ay ka sii jaango'an tahay. Maxaad ku sameyn doontaa tusaalahaaga Parrallels Windows haddii aad rabto inaad u guurto Linux mustaqbalka? Dhib malahan Fusion…
16, 2007 at 9: 52 AM
Ma hubo in Linux ay ku jirto mustaqbalkeyga dhow marka laga eego aragtida isticmaaleyaasha meheradaha desktop-ka. Isbarbar dhigyada waxaan ku wadi karaa dhammaan barnaamijyada ganacsi ee aan u baahanahay. Waxaan sidoo kale ku wadi karaa Linux isbarbardhigga (Ubuntu waan lahaa laakiin runtii waan ku mashquulsanaa rakibiddayda!).
Waxaan ahay taageere hufnaan iyo VMWare. Runtii waxaan u rarayaa deegaankeena wax soo saar Bluelock, shirkad si wanaagsan ula shaqeysay barnaamijyada martigelinta ee VMWare.
Wanaagsan inaan halkan kugu arko, Dale! Waxaan arkay waraaqaha ExactTarget IPO loo gudbiyay SEC. Waxyaabaha qabow!
16, 2007 at 3: 49 AM
Qoraal ku saabsan hufnaanta iyo mac, oo kaliya waxaad sheegaysaa mid ka mid ah ciyaartoyda waaweyn? Aaway jacaylkii VMWARE (oo aan u maleynayo inuu ka sarreeyo) kaliya waxay u egtahay in la "safeeyey").
16, 2007 at 9: 55 AM
Waxaan ka baqayaa inaan ahay newb markay timaado VMWare oo aanan heysan. Waxaan u maleynayaa inay tahay sababta oo ah wax kasta oo aan u baahnahay waxay si fiican ula shaqeynayaan Isbarbar dhigyo. Sidii aan ku qoray Dale kor ku xusan, VMWare waxay qayb muhiim ah ka noqon doontaa geynta wax soo saarkeena dhowaan, in kastoo. Waxaan awoodi doonnaa inaan ku celcelino bay'adaha oo aan la imaanno 'dhadhan' kala duwan oo ah codsigeenna sanadka soo socda.
17, 2007 at 2: 16 PM
Kaliya waxaan u cusbooneysiiyay Isbarbardhigga nooca ugu dambeeyay, haddana Vista (Ganacsi) ayaa iiga baahan inaan mar kale dhaqaajiyo, firfircoonaanta khadka tooska ahna ma shaqeyneyso. Tani waxay sidoo kale dhacdaa haddii aad rabto inaad socodsiiso VMware ama Isbarbar dhigga iyadoo lala kaashanayo bootcamp.
17, 2007 at 5: 39 PM
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida Microsoft ay ula macaamili doonto hufnaanta iyo hawshooda waxqabadka - wax aanan ka fikirin! Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay mid ka mid ah faa'iidooyinka la socda xirmada cusub ee hufnaanta Microsoft, Hyper-V!
18, 2007 at 12: 21 AM
Waa wax aad u xanaaq badan oo aan awood u lahayn in la isticmaalo labada nooc ee bootcamp ee Windows oo ay weheliyaan foomka VMWare sababtoo ah xayiraadaha firfircoonaanta. (Waxay arkeysaa "qalabka isbadalka" wuxuuna ku shaqeynayaa markaad foomka kale u wareegto).
Anigu ma ihi Windows neceb sinnaba, laakiin tani way iska cad tahay markii aan iibsaday nuqul sharci ah oo ah Ganacsiga Vista.